These4Stretches Will make you Forget Back Pain Forever » OMGoodness
Statistics for ailments like lower back pain are skyrocketing – according to the American Chiropractic Association, 31-million Americans are experiencing lower back-pain at any given time. It’s actually one of the most common complaints in doctor offices worldwide. Here are 4-easy stretches for lower back-pain relief which will do wonders for anyone who spends most of their day sitting inastationary position or anyone who has back-pain regardless of their level of activity.
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ခါးနာရောဂါခံစားနေရသူတွေဟာ အချိန်တိုင်းတိုးပွားနေပါတယ်။ ဒီ ၃မိနစ်စာ Video file လေးဟာ အိမ်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူလိုက်လုပ်လို့ရမယ့် ကျုံ့ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း ၄မျိုးကို ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်း ၄မျိုးကို နေ့စဉ် ၅မိနစ်ခန့်လုပ်ပေးရုံနဲ့ ခါးနာရောဂါကို ပျောက်ကင်းတာကြောင့် အားလုံး Save လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ Video file ကို ဖုန်းဘေနည်းနည်းနဲ့ ကြည့်ချင်သူများအတွက် မိမိအဆင်ပြေသော resolution ကို ပြောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ 144p ဟာ data size အသေးဆုံးဖြစ်ပြီး 1080p ဟာ ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Video ကို Play လုပ်ပြီး ညာဖက်အောက်က Setting -> Quality->Auto(___) ကို ပြောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: Top 10 Healthiest Foods All Around The World
NEXT POST Next post: OMGSmartFood’s Detox plan